သင်သည် YouTube ရောင်စုံမီးခိုးဗုံးဗီဒီယိုမီးခိုးဗုံးစာရွက်သုံးပြီးလုပ်မယ့်အစား, ပြွန်တိပ်နှင့်အတူရှာဖွေ Install လုပ်နိင်တဲ့စစ်တပ်မီးခိုးဗုံးဖေါ်ပြခြင်းကဗီဒီယို, အတူအတုအယောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းယုံကြည်ကြောင်းကိုဖတ်ကြပေမည်။ ငါဖြစ်ကောင်းမှန်ကြောင်းထင်ပေမယ့်ဒါဟာအဘို့စာရွက်ခှငျ့မပါဘူး အရောင်မီးခိုးဗုံး (ငါသည်သင်တို့ကိုမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါထည့်သွင်းရှောင်ရှားကြောင်းထောက်ခံချက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီသော်လည်း - ငါသို့ကြည့်မျှော်ပေါ့) ။
အရောင်မီးခိုးဗုံးသစ်ကိုမရှိကြပေ။ အဆိုပါ သည်အခြားချက်ပြုတ်နည်းများ ငါအဖြစ်ဝေးတစ်ဦးကရောင်စုံမီးခိုးဗုံးကွဲပြားသောဆိုးဆေးနှင့်အတူပုံမှန်မီးခိုးဗုံးဖြစ်ပြီး 1936 အဖြစ်ပြန်နေ့စွဲစာရင်းပါပြီ။ အဆိုပါလှည့်ကွက်ရိုးရှင်းစွာမီးရှို့ခြင်းထက်, လေထုထဲကိုဆိုးဆေးကိုလွှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ငါမီးခိုးဗုံး၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေအများကြီးရပါတယ်။ တစ်ဦးမီးခိုးဗုံးအောင်ပြီးနောက်အစားအစာအဘို့သင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိုသုံးပါကစိတ်ချရသနည်း မီးခိုးဗုံးကို non-အဆိပ်သင့်လား? မီးခိုးဗုံးကနေမီးခိုး Non-အဆိပ်သင့်လား?
အဆိုပါ ဂန္မီးခိုးဗုံးစာရွက် အလွန်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများသကြားနဲ့ saltpeter ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့သကြားမဟုတ်သောအဆိပ်သင့်ကြောင်းသဘောတူနိုင်သည်ထင်ပါတယ်။ သငျသညျ saltpeter (ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်) အတွက် MSDS ကိုဖတ်လျှင်, သင်ကသင်တက်ပစ်စေမည်နှင့်အခြားနိုက်ထရိတ်နဲ့တူပါကမူလနိုက်ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကလေးတွေစားရန်အဘို့အရာကောင်းသည်ကိုမဖွင့်ပေမယ့်တစ်ဦးမယ့်အစာစားခြင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ် အဆိပ်။ သင်ကအစာစားတာကိုလျော့နည်း, မီးခိုးဗုံးကိုမြည်းစမ်းမနေသင့်ပေမယ့်သင်ပြုလျှင်, မဖြစ်နိုင်မယ့်သင် (အဆိပ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုပဌနာပြု) သေလွန်သောသူတို့သည်ကျော်ကျကြလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးမီးခိုးဗုံးအောင်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိုလျှော်ပါကချက်ပြုတ်ဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါမှတ်သားသင့်တယ်: သင်ကဒီစာရွက်နှင့်သင်၏ဒယ်အိုးဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသကြားလုံး (ဆိုးရွားစွာ) ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်လျှင်သင်ပြုသောမီးရှို့ရာသကြားကိုသိနှင့်အိုးအတူတကွကောင်းမွန်စွာမသွားကြပါဘူး။ မီးခိုးမှုန်များသင့်ရဲ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်းစနစ်ကအဘို့ကြီးသောမရှိကြပေ။ မီးခိုးဗုံးကနေမီးခိုးမပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်လုံခြုံတဲ့မီးပုံကနေမီးခိုးထက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရောင်စုံမီးခိုးဗုံးမှပေါ်ရွှေ့နေသည် ... ကျွန်မအော်ဂဲနစ်ဆိုးဆေးမစားဘဲနေလိမ့်မယ်, မငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြောင့်အသက်ရှူလိမ့်မယ်။ သင်ရွေးချယ်အထူးဆိုးဆေး၏ MSDS ကိုသင်အသေးစိတ်ကိုငါပေးမည်, သင်သည် MSDS ကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။ ငါဓာတ်ခွဲခန်း၌ဤကဲ့သို့အရာတစ်ခုခုကိုမဟုတျဘဲငါ့အမီးဖိုချောင်စေချင်ပါတယ်။ မီးခိုးရှိုးမဟုတ်ဘဲရှူရှိုက်မိပါသည်။ ဒါဟာအများဆုံးဓာတုဗေဒဆန္ဒပြပွဲများများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူတန်းတူပါပဲ။ ဒါဟာပျမ်းမျှလူတစ်ဦးဖြစ်စေလိုပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခုမပေးသင်လုပ်နေလုပ်နေအရာကိုသိနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုသုံးပါလျှင်အန္တရာယ်ကင်းပေမယ်။
ပရင်တာမင်အရဲ Make လုပ်နည်း
ရေ - ဝိုင် - နွားနို့ - ဘီယာဓာတုဗေဒဆန္ဒပြ
စမ်းသပ်ခြင်း Tube မိုးကြိုးမုန်တိုင်းဆန္ဒပြ
မီးရှူးမီးပန်းများ Lab မှ: သက်တံ့ရောင်ဓာတုဗေဒဆန္ဒပြ
ဘာ Fulgurite သည်နှင့်မည်သို့တစ်ခုမှာ Make ရန်
မမြင်နိုင်သောမှင် Make လုပ်နည်း
Crystal ငါးကြက်တံခွန်စျခှငျသို့မဟုတ် Decoration
သူတို့ကအာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်လာဘယ်တော့မှ: အမာကျူရီ 13 ၏ပုံပြင်
2013 Harley-Davidson ဝယ်သူလမ်းညွှန်
ဗိုလ်မှူး Chord ပြောင်းပြန်ဂစ်တာသင်ခန်းစာ
အဆိုပါကို Reverse PIN ကို Hoax - မြို့ပြ Legends
တွမ် Weiskopf ကိုယ်ရေးဖိုင်
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 10 ဂရမ်မီဆုချီးမြှင့်ဖျော်ဖြေ
Gemini နှင့် Sagittarius မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
အဆိုပါဖြစ်အံ့ဆဲဆဲဆယ်စုနှစ်ထဲမှာရော့ခ်ခန်းမကို Join သင့်ကြောင်း '' 80s ဂီတအဆိုတော်များ
အီရတ်ဘုရားနှင့်နတ်ဘုရားမများ Asmar ပန်းပုသိုလှောင်ကိုပြောပြပါ
အဆိုပါနောက်ဆုံးအမည် Peterson, အဓိပ်ပာယျနဲ့မူလအစ
ငြိမ်း, ကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်နှင့် Siege
ပြည်နယ်နှင့်နေ့စွဲအားဖြင့် Arbore နေ့ပြက္ခဒိန်
အဓိပ္ပာယ်နှင့်အပြောအဆိုအတွက် Progymnasmata ၏ဥပမာများ
Titanosaur ဒိုင်နိုဆောရုပ်ပုံများနှင့် Profiles